ကေ ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတဲ့ ရွှံရုပ်လေးလား။
အဖော်လေးတွေပါ ထည့်လုပ်မှပေါ့ ကေ..
အဲဒါ ဘယ်သူလဲ ဒေါ်ကေ။
ပျော်ပျော်နေလိုက်ပါ ဂလွန်မီ ရုပ်လေးရယ် ၊၊
There is always another day that you can enjoy.
We all'be always with you.
ပူဆွေးနေတဲ့ ပုံလေ သူလည်း လောကဓံဒဏ်ကို တော်တော်ခံရပြီးဖြစ်မယ် ။
တကယ့်ကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်နေပုံပါလား..ကေရယ်.clay နဲ့လုပ်ထားတာလားဟင်..အသက်ဝင်လိုက်တာ..။
အဟဲ- ခပ်တည်တည်နဲ့ငြိမ်နေမလို့- မသိဂီ င်္ လာမေးမှ.. သူများထုတားတဲ့ အရုပ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလာတာပါ။ ကပ်လျက်ပို့စ် မှာတော့..ပြောထားပါတယ်။